ANTOKO MONIMA: FANAMBARANA - rov@higa
ANTOKO MONIMA: FANAMBARANA
24 Novembre 2010, 12:21pm
Publié par Monima
(Madagasikara Otronin’Ny Malagasy)
Antananarivo, 23 Novambra 2010
Manoloana ny krizy marolafy mihatra amin’ny firenentsika,
Manoloana ny tebiteby iainan’ny rehetra noho ny tsy fisian’ny fandriampahalemana,
Manoloana ny fahantrana mavesatra dia mavesatra mianjady amin’ny 75% ny malagasy manerana ny Nosy,
Manoloana ny fihetsika mifanipaka tanteraka amin’ny demokrasia sy ny fiovana tena izy, fihetsika ataon’ny fitondrana tantanan’Atoa Andry Rajoelina, izay nibaribary tato anatin’ny herinandro vitsivitsy, dia manao izao fanambarana izao ho an’ny vahoaka ny Antoko Monima.
Voalohany : niharaha-nahita ny kitoatoa sy ny tsy ara-dalàna maro nanodidina ny fanatanterahana ny referandaoma natao amboletra ny 17 Novambra 2010 iny ;
Raha ny vokatra ofisialy avoaka indray, dia azo heverina fa ny taha-pahavitrihana tena marina, fa tsy namboarina dia hizay hita teto Antananarivo renivohitri MAdagasikara: 38% ;
Io dia manambara fa tsy nahazo ny fankatoavan’ny maro an’isa velively io lalam-panorenana ambara fa lany io ;
Manamarina ny fanambarana nataon’Atoa Monja Roindefo io vokatra io satria tsy hamaha ny olana fa vao mainka hampitombo ny korontana misy.
Faharoa : melohin’ny Monima tanteraka ny fanosihosen’ny mpitondra ankehitriny ny zo fototra famantarana ny tany tan-dalàna sy demokratika :
- eo ny fisakanana ny fanehoan-kevitra ho an’ny tsy mitovy fijery amin’ny mpitondra. Raràna ny famoriam-bahoaka am-pilaminana, samborina ary gadraina izay mitsangana hampiaina ny demokrasia, ka ny mpitandro filaminana no ampiasaina, ka zary lasa herim-pamoretana ho an’ny vahoaka,
- eo koa ny fandrahonana ny tompon’ny haino aman-jery sy ny mpanao gazety. Tsy afaka manao ny asany an-kalalahana iey ireo ka very ny zo fototra hananan’ny olom-pirenena hahazo vaovao,
- manginy fotsiny ny fampiasain’ny mpitondra ankehitriny ny Fitsarana izay lasa fitaovana managadra ny olona noho ny hevitra tsy mitovy. Izao aza, ary zava-doza ho an’ny fahafahana izany, dia misy ireo gadra pôlitika tsy fantatra ny toerana hanagadrana azy.
Tsy ireo fanitsakitsahana ny zo fototra ireo akory no hitondra ny fitoniana pôlitika ilain’ny firenena.
Fahatelo : ny Monima dia mijoro ary manatevina ny ezaka ataon’ny Filoha Nasionaly Monja Roindefo, eo amin’ny fikatsahana ny fomba hialan’ny firenena amin’izao krizy izao.
Izany no hamerenana indray, ny antso avo hoa an’ny hery pôlitika sy sendikaly tsy misy avakavaka, ho an’ny fikambanana rehetra eo amin’ny fiaraha-monim-pirenena. Antso avo mba hifanatona aminy, hiara-mamolavola sy hanatanteraka ny zotra mankany amin’ny fiovana tena izy sy ny Repoblika faha IV marin-toerana, hankatoavin’ny firenena sy ny iraisam-pirenena.